မမဝသုန် နှင့် အပြာရောင်တောင်တန်းများ: November 2013
မနေ့ က စာ
မနေ့က ပို့လိုက်တဲ့ စာလေး ရရဲ့လား။
ပန်းဆိုတာ အချိန်တန်တော့ ကြွေတာပဲ ဆို..၊
ပန်းပင်တွေကို စိုက်ချင်နေတုန်း ချစ်တုန်းလား။
ဝတ်ရုံလွှာ ပြောင်းဝတ်တတ်တဲ့ မြို့မှာ မီးလင်းဖိုတွေ လင်းနေပြီ၊
အိမ်အပြန် ဇရာကို အပါ ခေါ်မှာလား။
ကျဉ်းကျပ် နေတဲ့မြို့က လွတ်လပ်ပေါ့ပါးသူ
လွတ်လပ်တဲ့ တိုင်းပြည်က စိတ်အကျဉ်း ကျနေသူ
ဘဝရဲ့ ထိုထို ဤဤ စကား .. နောက်နေ့ မနက်မှာ ကြားပါရစေ။
ပေးစရာတွေများ ရစရာတွေ များလွန်းတယ်.. ၊
ကြွေးတင်ရင် ဆပ်ပေးမယ့် ရှင်ဘုရင်လည်း ရာဇဝင်ထဲမှာ ကျန်ခဲ့ပြီ။
အပြန်မှာ အာလူး တစ်လုံးလောက် ဝယ်ခဲ့ပါကွယ်..။
Posted by ပျိုးယုဝသုန် (Pyo Yu Wathone) at 13:22
Have you receivedaletter sent by yesterday?
Pears are going to ripe soon.
Flower will fall if in time,
Still loving growing flower plants?
Fire-places have light in the Color Changed Town,
Would you bring Aged when you back?
Free Man from narrow and tighten town,
Independent Kingdom and imprisoned soul..
Let me hear some words about life on tomorrow,
Sinking in debt and Sleeping King in History of the Past..
Bringapotato when you back.
Posted by ပျိုးယုဝသုန် (Pyo Yu Wathone) at 02:04